दशैंमा घर जाँदै हुनु हुन्छ ? एकपटक पढ्नुहोस्, स्वस्थ्य मन्त्रालयले जारी गर्यो यस्तो सुचना ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/दशैंमा घर जाँदै हुनु हुन्छ ? एकपटक पढ्नुहोस्, स्वस्थ्य मन्त्रालयले जारी गर्यो यस्तो सुचना !
काठमाडौं ०८ असोज / मुलुकभर कोरोना संक्रमित सङ्ख्या बढ्दै जान थालेपछि स्वस्थ्य मन्त्रालयले थप सजगता अपनाउन अनुरोध गरेको छ । पछिल्लो समय दैनिक हजार भन्दा माथि संक्रमित भेटिरहेको अवस्थामा थप सजग रहन आग्रह गरेको हो ।
देशभर २५ हजार भन्दा माथि सक्रिय संक्रमित भएमा पुन: लकडाउन गर्न मन्त्रालयले सिफारिस गरिसकेको छ । त्यस्तै नेपालीहरुको महान चाडहरु नजिकिँदै गर्दा कोरोना झनै फैलिन सक्ने भन्दै सरकारले यो बर्षको दशैं यथास्थानमा मनाउन समेत आग्रह गरेको छ ।
कोरोना सङ्क्रमण फैलिरहेकै बेला अहिले लामो तथा छोटा दुरीका गाडी सञ्चालनमा छन् भने आन्तरिक हवाई उडान पनि सुरु भइसकेको छ । होटेल तथा खाजा घरहरु पनि धमाधम खुलेकाले कोरोनाको जोखिम थप बढेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो ।
यस्तै दशैँ, तिहार रर छठ जस्ता पर्व नजिकिँदै गएकाले पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा कोरोनाको सङ्क्रमण सजिलै फैलने खतरा बढेको उहाँले बताउनुभयो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर गौतमले निषेधाज्ञा खुलेपछि कोरानाको सङ्क्रमण बढेकोले अब आउँदै गरेका चाड पर्वका कारण अझ सङ्क्रमण फैलन सक्ने बताउनुभयो । उहाँले दशैँ नजिकिँदै गर्दा शहर र घनाबस्तीबाट आफ्नो घरगाँउ जाने क्रम सुरु भइसकेकाले जोखिम बढेको बताउनुभएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘दशैँमा घर जाँदा कतै बाआमालाई कोरोना कोसेली पो लिएर जाँदै छैनौँ ?’ दशैँमा आशीर्वाद लिन घर जाँदा कतै कोरोना पनि छ कि भनेर स्वास्थ्य सावधानी अपनाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले गाउँ घरमा रहेका ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घ रोगीहरुलाई कोरोनाबाट जोगाउन चुनौती थपिएको पनि बताउनुभयो ।
एलिसाको, टि’क टक ,चेक गर्दा होसै उडाउने * कर्तु,त यती ठुलो, प्रमाण, मर्नु अघि यस्तो, सम्म ,भएको, रहे,छ(भिडियो हेर्नुहोस)
नेपालमा रहेका १३ इन्डोनेसियनलाइ नेपालीले बस्न दिएनन्, जता जाँदा पनि लखेटिएपछि प्रहरीले भ्यानमा हालेर घुमाउँदै !
हेर्नुहोस। दशैको मुखैमा दुखद खबर (सेयर गर्नुहोस)
संविधानमा नयाँ नक्सा समावेश भएपछि देशभर खुशीयाली